लकडाउनमा अनिन्द्राको समस्या ! कसरी मुक्ति पाउने ? - Khabarshala लकडाउनमा अनिन्द्राको समस्या ! कसरी मुक्ति पाउने ? - Khabarshala
लकडाउनमा अनिन्द्राको समस्या ! कसरी मुक्ति पाउने ?
कोरोनाको संकट तथा बन्दा बन्दिले मानिसको जीवनशैलीमा परिबर्तन आएकोछ । ब्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप, खानपान, यौन जीवन, निन्द्रा जस्ता कुरामा पनि उतारचढाव ल्याएको छ। जीवनका लागि खानापान जति आवश्यक हुन्छ, उत्तिनै निन्द्राको पनि आवस्यकता पर्दछ।
शारिरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन प्रयाप्त निन्दाको जरुरत पर्दछ।निदाएको अवस्थामा मानव शरीरका सबै प्रणालीहरूको नवीकरण हुन्छ। यसले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई विश्राम मिल्छ।
अनिन्द्राको समस्याले अल्जाइमर्स – डिमेन्सिया, मुटु र धमनीसम्बन्धी रोगहरू, जस्तो उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघातको सम्भावना बढछ । मधुमेह,पेटको समस्या ,मोटोपनको जोखिम बढछ । यसले
एउटा ब्यक्तिले दैनिक औसत ७ देखि ८ घण्टा मस्त निदाउनुपर्छ । तर कहिले काहीँ एक दुई रात निन्द्रा लागेन भने त्यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ। यस्तो प्राय धेरैलाई हुन्छ । हप्तौं वा महिनौं देखि अनिन्द्राको समस्याले सताएको छ भने यसको समाधान खोज्नुपर्छ।
एक्कासी आईपरेको समस्या
प्राकृतिक बिपत्ति , रोगको संक्रमिण जस्ता कुरा मान्छेको बहसमा हुदैनन। कहिले देखापर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुदैन । त्यसको सामना गर्न मानसिक रुपमा ब्यक्ति तयार भएको पनि हुदैन । कोरोनाको संकट पनि एक्कासी देखापर्यो । नयाँ रोगले बिश्व भरि नै महामारीको रुप लिदा मानिसमा तनाब, डर , चिन्ता, उत्तेजना, आवेग बढेर जानु स्बभाविकै हो । जसले छोटो समयको लागि अनिन्द्राको समस्या ल्याउन सक्छ । प्रकोप कम हुँदै जादा अनिन्द्राको समस्या पनि कम हुँदै जान्छ। तर आफ्नो स्व हेरचाहमा भने ध्यान पुर्याउनु आबस्यक हुन्छ।
गहिरो निन्द्राको लागि सक्रिय दिनचर्या आवश्यक हुन्छ । त्यसैले लकडाउनमा अनिन्द्राको समस्या नहोस् भन्नका लागि शारीरिक गतिविधिलाई बढाउनुपर्छ। घरको काम गर्ने, हिँड्ने, खेल्ने, व्यायाम गर्ने गतिविधि जारी राख्नुपर्छ । सुत्नुअघि हल्का व्यायाम गर्नु राम्रो हुन्छ ।
खानपान र निन्द्राको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । गलत खानपानले व्यक्तिको निन्द्रामा असर गर्न सक्छ ।
बिपत्तिको बेला खानपानमा पनि समस्या आउन सक्छ। खानेकुराको अभाव हुन सक्छ । स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा जुटाउन गार्‍हो पर्न सक्छ । तर पनि सकेसम्म खानपानलाई संतुलित बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ।
खानामा पौष्टिक तत्वको कमि तथा अत्याधिक मात्रामा जंक फुडहरु खानाले अनिन्द्राको समस्या देखिन्छ । कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना बढी खानाले, चीनी, मैदा, सोडा, कुकिज, सेतो चामल र रोटी जस्ता खानाले अनिन्द्राको समस्यालाई बढाउछ।
धेरै चिया, कफी, सफ्ट ड्रिंक , अत्याधिक अमिलो , पिरो, मसलायुक्त खाना, धेरै चिल्लो खानेकुरा, चुरोट, रक्सी तथा लागु औषधिको सेवनले अनिन्द्राको समस्या बढाउछ । त्यसैले बन्दाबन्दीको समयमा अनिन्द्राको समस्याबाट मुक्ति पाउन खानेकुरामा बिशेष ख्याल गर्नु पर्छ।
बिशेष गरि मानसिक आघात, डर – चिन्ता जन्य समस्याहरु तथा डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्या बढीमा देखिएकोछ । तनाव, डर – चिन्ता , डिप्रेसन तथा अन्य मानसिक समस्यामा मनमा धेरै कुरा खेल्ने, डर लाग्ने, छट्पटी हुने जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् । जसले निन्द्रामा अबरोध पुर्याउछ। यस्तो अवस्थामा मनलाई शान्त र एकाग्र बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
गहिरो सास लिने र छाड्ने तथा अन्य आरामदायी अभ्यास गर्नु फाईदा जनक हुन्छ । तनाब ब्यबस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। मानसिक रोग वा मनोवैज्ञानिक कारणले अनिन्द्राको समस्या देखिएको हो भने मनोविद् , मनोपरामर्शदाता वा मनोचिकित्सकलाई भेटि मानसिक रोगको उपचार गर्नुपर्छ । मानसिक रोगको उपचारसँगै अनिन्द्राको समस्या पनि कम भएर जान्छ ।